डब्लुएचओले कोरोना भाइरसका भेरियन्टको नाम राख्यो, कुन देशमा भेटिएका भेरियन्टको नाम के? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
डब्लुएचओले कोरोना भाइरसका भेरियन्टको नाम राख्यो, कुन देशमा भेटिएका भेरियन्टको नाम के?
स्वास्थ्यखबर मंगलबार, जेठ १८, २०७८, १२:०१:५४
काठमाडौं- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले कोरोना भाइरसका भेरियन्टहरुको नामाकरण गरेको छ। डब्लुएचओले विभिन्न देशमा पहिलोपटक रिपोर्ट भएका भेरियन्टहरुको नामाकरण गरेको हो।
संगठनका अनुसार बेलायतमा पहिलोपटक भेटिएको कोरोना भाइरसको भेरियन्टलाई अल्फा, दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको भेरियन्टलाई बिटा, ब्राजिलमा भेटिएको भेरियन्टलाई गामा र भारतमा भेटिएको भेरियन्टलाई डेल्टा नामाकरण गरिएको छ।
ब्राजिलमा भेटिएको पी.१ भेरियन्टको नाम गामा हो।
भेरियन्टको नामलाई देशसँग जोडेर आउन थालेपछि विभिन्न देशले त्यसको विरोध गरेका थिए। संगठनले देशहरुको नाम नजोडियोस् भनेर भेरियन्टको नामाकरण गरेको हो।
संगठनकी कोभिड–१९ प्राविधिक समितिकी मारिया भान कर्खोभले कोरोना भाइरसको भेरियन्ट पहिलोपटक पत्ता लागेको वा त्यसबारे जानकारी गराएकै आधारमा कुनै पनि देशलाई कलंकित गर्न नहुने बताइन्।
नेपालमा बेलायतमा भेटिएको अल्फा, भारतमा भेटिएको डेल्टा र काप्पा भेरियन्ट फैलिएको छ।